Matongerwo eNyika, 02 Mbudzi 2019
Mugovera 2 Mbudzi 2019
Hurumende Yoyambira Vashandi Vayo vari Kuramwa Mabasa
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vakazivisa nezuro kuti vachange vachipinda mumigwagwa neChitatu chinouya vachiratidza kusafara kwavo nekwavanoti kushaya han’ya kwehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo.
Gumiguru 31, 2019
VaMthuli Ncube Vanoti Hupfumi hweNyika Huchaderera Gore Rino
Gurukota rinoona nezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube vanoti hupfumi hwenyika huchaderera gore rino nezvikamu makumi matanhatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 6.5%.
VaChitambara Vanoti Hurumende Yakaisa Mari Shoma Mubazi reHutano
Vachitaura pamusangano wakaitwa ne LEDRIZ nevatori venhau neChitatu manheru muMasvingo, chipangamazano musangano iri, Doctor Propsper Chitambara, vakati matambudziko ari kusangana nebazi rehutano munyika gore rino ari kukonzerwa nekuti hurumende yakaisa mari shoma shoma kubva mubhajeti kubazi iri.
Vanachiremba Vanoramba Kumira pamberi peKomiti yeHealth Services Board
Komiti inoranga vanokanganisa pamabasa, kana kuti disciplinary committee, yakaumbwa neHealth Services Board kuti inzwe nyaya dzavanachiremba vari kuramwa mabasa inonzi yatanga kunzwa kubva kuna vanachiremba ava zvikonzero zviri kuita kuti vasaenda kumabasa.
Twitter Inoti Haichatambira Kushambadza Zvematongerwo Enyika
Makambani epa dandemutande, kana kuti ‘social media’ eTwitter, Facebook, Instagram, WhattsAp nemamwe, arikupomerwa mhosva yekuti anobudisa nhau dzisiri dzechokwadi uye kuti haasarudi zvinoiswa pa dandemutande rawo.
Vari Kunze Vokurudzirwa Kubatsira Kugadzirisa Matambudziko Kumusha
Vari munyika vanonzi vari kunetsaka kuwana zvacho zvavanoda zuva nezuva zvakaita semvura, magetsi, uye chikafu, ukuwo mitengo yezvinhu ichiramba ichiita chamurambamhuru kukwira.
Hurumende Inokurudzirwa Kutsigira, Kusimbaradza Mari Itsva
Bhanga guru renyika, reReserve Bank of Zimbabwe, razivisa kuti richadhinda mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematanho ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari munyika, pamwe nekugadzirisa zvinhu mumabhanga nemisika yemari munyika.